ရှေ့ဆံမြိတ်လှလှလေးချလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? | CosmeticMyanmar
Home » Article » ရှေ့ဆံမြိတ်လှလှလေးချလို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?
ကိုရီးယားရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရင် ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးလေးတွေက များသောအားဖြင့် ရှေ့ဆံပင်လှလှလေးတွေချပြီး ချစ်စရာကောင်းအောင်ပြင်ဆင်ထားတာကို အများအားဖြင့်တွေ့ရမှာပါ။ဒါကြောင့် ပျိုတို့တွေလည်း ဆံမြိတ်လှလှလေးတွေရအောင် ဘယ်လိုဖန်တီးလို့ရနိုင်မလဲဆိုတာကို CosmeticMyanmarကနေ ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်နော်။
ပထမနည်းလမ်းကတော့ ဆံပင်ကောက်တဲ့ hair rollerလေးတွေနဲ့အလွယ်တူဖန်တီးလို့ရပါတယ်။ ဆံပင်ကို ၃ပိုင်းခွဲပြီးအလည်ပိုင်းကို hair rollerလေးနဲ့ အတွင်းပိုင်းကိုဦးတည်လိပ်ပြီး ထားပေးရပါမယ်။ ဘေး၂ဖက်ကဆံပင်လေးတွေကိုလည်း အလားတူအတွင်းပိုင်းကို ဦးတည်လိပ်ပြီး မျက်နှာဘေးနှစ်ဖက်ကို ကျနေတဲ့ပုံလေးကို ဖန်တီးပေးနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ ဒီhair rollerတွေနဲ့လိပ်ထားတဲ့ဆံပင်တွေကို dryerလေးနဲ့အပူပေးလိုက်ရင် ပုံသွင်းပြီးသားဖြစ်သွားမှာဖြစ်သလို အကယ်၍အချိန်များရမယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ်ညအိပ်တဲ့အချိန်မှာ hair rollerလေးတပ်ပြီးအိပ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဖြည်ချလိုက်တဲ့အခါ ကွေးကွေးဝိုက်ဝိုက်လေးကျနေတဲ့ ဆံမြိတ်လှလှလေးကိုရရှိမှာပါ။
ဒါမှမဟုတ် see through bangsလေးကို ဖန်တီးချင်တာဆိုရင်တော့ အရှေ့ဆံပင်ကို ခုနကလိုပဲ ၃ပိုင်းခွဲလိုက်ပါ။ ပြီးရင် ၁ပိုင်းချင်းစီကို ဆံပင်ဖောင့်စက်လေးသုံးပြီး အတွင်းဘင်ကိုဦးတည်ပြီး ဖြောင်စြက်နဲ့ဆွဲပေးနိုင်ပါတယ်။ ကဲ ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ ပျိုတို့တွေလည်း ကိုရီးယားမင်းသမီးလေးတွေလို ဆံမြိတ်လှလှလေးချပြီး လှနိုင်ကြပါစေရှင်။